2018 – Year – Channel Myanmar
Skin (2018) Skin (2018)=========IMDb Rating - 7.0/10#Unicodeဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ဗိုက်ကင်းဆိုရှယ်ကလပ် ဆိုတဲ့အဖွဲ့က လမ်းဘေးမှာပျက်စီး လေလွင့်နေတဲ့ ကလေးတွေ ဆယ်ကျောက်သက်တွေကိုခေါ်ပြီး သူတို့အဖွဲ့ထဲရောက်အောင် ဆွဲခေါ်တယ် သူတို့အဖွဲ့ထဲရောက်ရင် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေ အကြောင်းကိုပြောဆိုသိမ်းသွင်းတယ် ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း အဲ့လိုမျိုးမုန်တီးရေးတက်တူးတွေကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထိုးတယ် ။အုပ်စု လိုက်ရမ်းကားတယ်၊ အဲ့ထဲမှာဘာရွန်ဝိုင်ဒါဆိုတဲ့တစ်ယောက်လည်းအပါအဝင်ပေါ့ ဘာရွန်က ကလေးသုံးယောက်အမေ ဂျုလီနဲ့ မတွေ့ခင်အထိ ဒီလိုဘဝထဲမှာကျင်လည်ရှင် သန်ခဲ့တာ ၊ နောက်ပိုင်းဂျုလီနဲ့ကြိုက်ပြီးအတူတူနေတယ် ဂျုလီကတော့သူတို့အဖွဲ့လုပ်ရပ်ကိုမကြိုက်ဘူး အကြောင်းက သူ့သမီးသုံးယောက်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ရယ် သူ့လိုဘဝမျိုးမကြုံစေချင်လို့ပေါ့၊ ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့ ဘာရွန်ဟာ သူတို့အဖွဲ့လုပ်နေကျအတိုင်း ဗလီထဲလူတစ်ချို့ကိုသတ်ရမယ့်အချိန်မှာသူတို့အဖွဲ့လုပ်ရပ်ကို နောင်တရပြီး အဖွဲ့ကနေ ထွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ၊ ဒီလို ဂိုဏ်းအဖွဲ့တွေကနေလွယ်လွယ်ထွက်လို့မရတဲ့အခါ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့မလဲဆိုတာကတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦး။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Tin Myo Lwin ပဲဖြစ်ပါတယ်။)#Zawgyiဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ ဗိုက္ကင္းဆိုရွယ္ကလပ္ ဆိုတဲ့အဖြဲ႕က လမ္းေဘးမွာပ်က္စီး ေလလြင့္ေနတဲ့ ကေလးေတြ ဆယ္ေက်ာက္သက္ေတြကိုေခၚၿပီး သူတို႔အဖြဲ႕ထဲေရာက္ေအာင္ ဆြဲေခၚတယ္ သူတို႔အဖြဲ႕ထဲေရာက္ရင္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈေတြ အေၾကာင္းကိုေျပာဆိုသိမ္းသြင္းတယ္ ခႏၶာကိုယ္မွာလည္း အဲ့လိုမ်ိဳးမုန္တီးေရးတက္တူးေတြကို ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ထိုးတယ္ ။အုပ္စု လိုက္ရမ္းကားတယ္၊ အဲ့ထဲမွာဘာ႐ြန္ဝိုင္ဒါဆိုတဲ့တစ္ေယာက္လည္းအပါအဝင္ေပါ့ ဘာ႐ြန္က ကေလးသုံးေယာက္အေမ ဂ်ဳလီနဲ႔ မေတြ႕ခင္အထိ ဒီလိုဘဝထဲမွာက်င္လည္ရွင္ သန္ခဲ့တာ ၊ ေနာက္ပိုင္းဂ်ဳလီနဲ႔ႀကိဳက္ၿပီးအတူတူေနတယ္ ...
IMDB: 7.0/10 11,390 votes
Cold War (2018) Cold War (2018)=============IMDb Rating 7.6/10#UnicodeCold Warကိုကြည့်ပြီးနောက် တွေးမိတာက ကျောင်းသင်ရိုးက မြန်မာကဗျာတွေရဲ့ အ‌ရေးပါပုံကိုပါပဲ။ Cold Warဟာ ဂီတသမားတစ်ယောက်က ဂီတတင်ဆက်မှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ လူစုတဲ့အကြောင်းကနေ အစပြုထားတယ်။ သူ့တင်ဆက်ချင်တဲ့ဂီတက နည်းနည်းတော့ထူးခြားတယ်။ ကျေးတောနေလူတန်စား‌တွေရဲ့ ဂီတ။ ကျွန‌်တော်တို့ မြန်မာကဗျာမှာသင်ရတဲ့ တောင်တွင်းရှင်ငြိမ်းမယ်ရဲ့ အိုင်ချင်းတွေလိုကဗျာတွေကို ဆိုကြတဲ့ဂီတမျိုးပဲ။ ကောက်စိုက်သမဂီတပဲဆိုရမယ်။ ဒီဂီတလေးတွေက ဒီကားရဲ့အသက်ပဲထင်တယ်။ Cold Warဟာ ဒီတစ်မူထူးတဲ့ဂီတ‌တွေကြောင့်ပဲ တခြားMusical Dramaတွေထက်ထူးနေတယ်။ ဒီဂီတကဗျာတွေရဲ့ အရေးပါပုံကိုခံစားမိတော့ ကျွန်တော် ကျောင်းသင်ရိုးကကဗျာတွေ အရေးပါတာတွေးမိတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာဆို သိချင်မှသိမယ်ကိုး။ မူရင်းပိုလန်ဘာသာကနေ အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတာကိုမှ ဗမာလိုပြန်ရေးတာမို့ Lost in Translation အများကြီးရှိနိုင‌်ပေမယ့် ဒီထဲက သီချင်းတွေကို ကျေးလက်ကဗျာ အငွေ့အသက်ရအောင်ပဲ ပြန်ထားပေးပါတယ်။Cold Warရဲ့တစ်ချို့ အခန်းတွေဟာ သိပ်လှတယ်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအခန်းက ကျေးလက်ဂီတတွေကို နိုင်ငံရေးစည်းရုံး‌ရေးသီချင်းဖြစ်အောင် မလွဲရှောင်သာလို့ သုံးပေးလိုက်ရပေမယ့် အဲ့ဒီဂီတတင်ဆက်မှုရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် အားလုံးလက်ခုပ်တီးနေချိန်မှာ လက်ခုပ်မတီးနိုင်တဲ့ ဂီတတင်ဆက်မှုရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် နှစ်ယောက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ မသက်မသာမျက်နှာတွေပါပဲ။ရုပ်ရှင်နာမည်ကတော့ ဇာတ်အိမ်ကို ပိုလန်ရဲ့စစ်အေးတိုက်ပွဲ ကာလအတွင်းတည်ထား တာမို့ Cold Warလို့ပေးထားပေမယ့်။ စစ်နဲ့ ပက်သက်တာ ဘာမှမပါပါဘူး။ သမိုင်းအစစ်တွေတော့ ယူသုံးထားတယ်။ Cold Warဟာ 2018ထွက်ဆိုပေမယ့် ဒါရိုက်တာက သူ့အနုပညာရည်ကို လက်စွမ်းပြချင်တော့ အဖြူအမဲနဲ့ရိုက်ထားတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်က ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံ ပညာနဲ့ အော်စကာဆန်ခါတင်၀င်ခဲ့သေးပေမယ့် Romaရသွားတယ်။ သူအသားပေးဖော်ပြသွားတဲ့ ကျေးလက်ဂီတတွေရဲ့ ခံစားမှုမျိုးကိုပဲ Cold War က ...
IMDB: 7.6/10 45,946 votes
One Winter Weekend (2018) Romanceချစ်သူတို့အတွက် ဆောင်းရာသီအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်လာပါပြီ "ကယ်ရာ"ဟာ အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုရဲ့ relationship ကဏ္ဍက စာရေးဆရာမတစ်ယောက် သူလုပ်ရတဲ့အလုပ်က datingနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ၊ dating stories လေးတွေကို ဆောင်းပါးတွေရေးပေးရတာပါ ဒီလိုအချစ်အကြောင်းတွေရေးနေတဲ့ စာရေးဆရာမလေးကိုယ်တိုင်ကတော့ ပျော်ရွှင်စရာနယူးယားညလေးမှာ သူ့ရည်စားအသစ်စက်စက်လေးဖောက်ပြန်တာကို ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ လက်တလောလုံးဝ ရည်းစားမထားတော့ဘူးဆိုပြီး သန္ဓိဌာန်ချလိုက်ပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့မဂ္ဂဇင်းတိုက်ရဲ့ဘော့စ်ကြီးက ဆင်ဂယ်ဖြစ်နေရင် ရေးစရာကုန်ကြမ်းမရှိပဲနေမယ်ဆိုပြီး ကယ်ရာ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း "မက်ဂန်"သွားမဲ့ နှင်းလျှောစီးခရီးစဥ်မှာ ကယ်ရာ့ကိုပါထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ One winter weekend ဆိုတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာပါတော့တယ် ကံကြမ္မာအကြောင်းဖန်တော့ နှင်းလျှောစီးကွင်းမှာ သူတို့တည်းဖို့ငှားထားတဲ့အိမ်ကို "ဘန်"နဲ့"ရှန်း"ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်လေးနှစ်ယောက်ကလည်းငှားပြီးသားဖြစ်နေလေရဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုတည်းမှာ တည်းနေတာချင်းတူတူ ဘန်တို့ကိုမှ လက်ဆောင်ခြင်းတွေပို့လိုက်၊ နှင်းလျှောစီးဘုတ်တွေပို့လိုက်နဲ့ဆိုတော့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တွေကိုဖြေရှင်းရတာကြိုက်တဲ့ ကယ်ရာတစ်ယောက် ဘန့်ရဲ့သရုပ်မှန်ကိုသိချင်လာပါတော့တယ် ဘန့်ရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ သရုပ်မှန်ကရော ဘာဖြစ်မလဲ ဘန့်ရဲ့အဲ့ဒီအချက်ကရော သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ relationshipအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိလာမှာလဲ ရည်းစားမထားခြင်းအနုပညာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုရေးနေတဲ့ ကယ်ရာကရော တကယ်ပဲတစ်ကိုယ်တည်းခရီးဆက်တော့မှာလား... ဆိုတာတွေအပြင် ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုပိုပြီးအသက်ဝင်စေတာကတော့ ကနေဒါတောင်တန်းတွေရဲ့ နှင်းဖုံးနေတဲ့အလှလေးပါပဲ Pure romance storyline လေးရယ် ဇာတ်ဆောင်နှစ်ယောက်လုံးက စာအုပ်တွေကိုချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်နေတာရယ် မင်းသားနဲ့မင်းသမီး တောင်ပေါ်ကို cableနဲ့တက်တဲ့အခန်းမှာ ပြောတဲ့ ဒိုင်ယာလော့လေးတွေ၊ လှပတဲ့ရှုခင်းလေးတွေရယ် Best friend တွေကြားကသံယောဇဥ်တွေ၊ တစ်ယောက်ဘဝကို တစ်ယောက်မြှင့်တင်ပေးပုံလေးတွေရယ် etc.တွေကြောင့် Romance ချစ်သူတွေအတွက်တော့ ကနေဒါနှင်းတောင်တန်းတွေဆီ စိတ်ကူးနဲ့အလည်သွားရင်း အေးအေးချမ်းချမ်းလေး ကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ ကားလေးတစ်ကားပါပဲ File Size - 941 mb Quality - web-dl 1080p Subtitle - burmese Translator - MTA Encoder - Thit San ...
#FriendButMarried (2018) Friend But Married ဆိုတဲ့ကားလေးက သူ့နာမည်လေးအတိုင်းပါပဲ သူငယ်ချင်းတော့သူငယ်ချင်း ဒါပေမယ့် လက်ထပ်မိသွားတယ်ပေါ့ သူ့နာမည်မှာတင် အဓိပ္ပါယ်ကပါနေပြီးသားပါ ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းလေးကတော့ ဒစ်တိုဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ကလေးဘဝတည်းက တီဗီကမိသားစု ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာသရုပ်ဆောင်တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်လေး အာယုကိုချစ်ကြိုက်မိပါတယ် အာယု ကသူ့စိတ်ကူးထဲကနတ်သမီးလေးပေါ့ အာယုကိုအပြင်မှာလဲတွေ့ရလိမ့်မယ်သူမထင်ခဲ့ပါဘူး ဖြစ်ချင်တော့ ကံကောင်းတဲ့တစ်ရက်မှာ အာယုဟာ သူတက်တဲ့ကျောင်းကိုမှဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာတက်ပါတော့တယ် ဖြစ်ချင်တော့ အတန်းထဲမှာခုံလွတ်နေတာလဲ ဒစ်တို့ဘေးမှာပဲရှိတော့ သူ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ် ဒီလိုနဲ့ အရမ်းချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတယ် ဒီကားမှာထူးခြားချက်က အခြား Friendship ကားတွေလို အချိန်အကြာကြီးသူငယ်ချင်းဖြစ်လာပီးမှအရောင်ပြောင်းသွားကြတာမဟုတ်ပဲ ဒစ်တို့ဖက်ကအစောကြီး ကတည်းကအာယုကိုကြိတ်crush နေတာပါ ဒီလို့နဲ့ BFF ကြီးအဖြစ် ၁၃နှစ်တောင် Friendzone ထဲအထည့်ခံရတဲ့ ဒစ်တို သူဘယ်လိုရုန်းထွက်သွားလဲဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရမှာပါ IMDb မှာလဲ rating မဆိုးဘူး cast တွေကလဲအကုန်ချောချောလှလှလေး နောက်ပြီးအိုဗာမတင်းတဲ့ romantic moment လေးတွေပါလို့ ကြည့်ရတာတစ်မျိုးအရသာရှိပါတယ် အင်ဒို ကားတွေလဲမခေတော့ပါဘူး နောက်ပြီး Crazy Little Thing Called Love ထဲကလိုမင်းသားနဲ့မင်းသမီး ညားသွားကြတာနဲ့တင် အဆုံးမသတ်ပဲ သူ့ရဲ့ sequel Friend But Married2ဆိုပြီး 2020 မှာထပ်ထွက်ထားလို့ တစ်ဆက်တည်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းတွေကိုပါကြည့်ရဦးမှာပါ File Size - 1.1 gb Quality - web-dl ...
Iron Brothers (2018) Iron Brothers (2018)================IMDb Rating - 5.6/10#Unicode2018 ကထွက်ခဲ့တဲ့ Action, Adventure, Drama အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းလေးပြောရရင် . . . အမဲလေးလိုက်လိုက် သားမွှေးလေးရောင်းလိုက်နဲ့ အတူတူနေထိုင်ကြတဲ့ အေဘယ်လ် နဲ့ ဟင်နရီတို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် သူတို့နေတဲ့တောင်ကြားလေးဆီ ရှိုရှုန်းမျိုးနွယ် အင်ဒီးယန်းတွေ တောင်ကြားဖက်ကို ကျူးကျော်လာလို့ မတော်တဆ အစ်ကိုဖြစ်သူဟင်နရီမှ အင်ဒီးယန်းတစ်ယောက်အား သတ်လိုက်မိတဲ့အခါမှာ မုဆိုးကနေ သားကောင်ဘဝကိုပြောင်းပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်း ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တာမို့ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Htoo Htoo Ka Joe ပဲဖြစ်ပါတယ်။)#Zawgyi2018 ကထြက္ခဲ့တဲ့ Action, Adventure, Drama အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ ကားေကာင္းေလးတစ္ကားကိုမွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးေျပာရရင္ . . . အမဲေလးလိုက္လိုက္ သားေမႊးေလးေရာင္းလိုက္နဲ႔ အတူတူေနထိုင္ၾကတဲ့ ေအဘယ္လ္ နဲ႔ ဟင္နရီတို႔ ...
IMDB: 5.6/10 1,001 votes
Hunter Killer(2018) Hunter Killer(2018) ((အက်ရှင်ဦးစားပေးစစ်ကားဖြစ်သဖြင့် Blu-Ray 1080p 5.1 CH ,Blu-Ray 720p အားUpdate ပေးလိုက်ပါသည်...))စစ်ကားကောင်းတွေ ငတ်နေကြသူတွေအတွက် ရုရှားနဲ့ အမေရိကန်ဆော်ကြမယ့် 2018 ထွက် Hunter Killer ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.... Hunter Killer ဆိုတာက အမေရိကန်ရေငုပ်သင်္ဘော အမျိုးအစားတစ်ခုရဲ့နာမည်ဆိုပါတော့...တစ်နေ့ အမေရိကန်ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီး (တန်ပါဘေး) ဟာ အာတိတ်သမုဒ္ဒရာထဲ ကင်းထောက်နေတုန်း ရုရှား ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီး ပေါက်ကွဲပျက်စီးသွားတာကြားလိုက်ရပါတယ်...ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားသလဲ စုံစမ်းနေတုန်း မရှေးမနှောင်းမှာပဲ သူတို့သင်္ဘော တန်ပါဘေးလည်း ဒုံးကျည်ထိမှန်ပြီး နစ်မြုပ်ခဲ့ရပါတယ်...အမေရိကန်အစိုးရ နဲ့ ရုရှားအစိုးရလည်း ဘယ်သူက စတင်ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတာ မသေချာပေမယ့် နှစ်ဖက်စလုံးမှာအထိအခိုက်ရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်... ဒါကြောင့် အမေရိကန် ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက နစ်မြုပ်သွားတဲ့ တန်ပါဘေးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ကပ္ပတိန် ဂျိုးဂလက်စ်ဦးစီးတဲ့ Hunter killer တစ်စီးလွှတ်ပါတော့တယ်... မြေပြင်မှာ လည်း ရုရှားသမ္မတရဲ့ခြေလှမ်းတွေစောင့်ကြည့်ဖို့ အထူးစစ်သားလေးယောက် ချထားလိုက်ပါတယ်....ရုရှား ...
Avengers: Infinity War (2018) MCU 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ျဖင့္ Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုေပါင္းတင္ဆက္ပါသည္။MCU ဇာတ္ကားအားလံုးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မွာ Download ႏိုင္ပါသည္။++++++++++++++++++++++++++++Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ္လုပ္ေရးမွ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ နွစ္က စျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ဇာတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ Iron Man-1 နဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအပိတ္ကေတာ့ Endgame (2019) ျဖစ္ပါတယ္။Marvel Universe မွာ Infinity Stone လို႕ ေခၚတဲ့ စြမ္းအား အၾကီးဆံုး ေက်ာက္တံုး(၆) လံုးရိွပါတယ္။ အဲဒီေက်ာက္တံုးေတြဟာ စၾကဝဠာအႏွ႕ံမွာ ျပန္႕က်ဲေနတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးခ်င္းစီမွာ သီးျခားအစြမ္းေတြ ရိွျပီး သာမာန္လူေတြ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲဖို႕ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပါပဲ။ Infinity War ရဲ႕ အဓိက ဗီလိန္ျဖစ္တဲ့ Mad titan ...
Avengers: Infinity War (2018) MCU
Black Panther (2018) MCU 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ျဖင့္ Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုေပါင္းတင္ဆက္ပါသည္။MCU ဇာတ္ကားအားလံုးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မွာ Download ႏိုင္ပါသည္။++++++++++++++++++++++++++++Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ္လုပ္ေရးမွ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ နွစ္က စျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ဇာတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ Iron Man-1 နဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအပိတ္ကေတာ့ Endgame (2019) ျဖစ္ပါတယ္။Marvel Universe မွာ Infinity Stone လို႕ ေခၚတဲ့ စြမ္းအား အၾကီးဆံုး ေက်ာက္တံုး(၆) လံုးရိွပါတယ္။ အဲဒီေက်ာက္တံုးေတြဟာ စၾကဝဠာအႏွ႕ံမွာ ျပန္႕က်ဲေနတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးခ်င္းစီမွာ သီးျခားအစြမ္းေတြ ရိွျပီး သာမာန္လူေတြ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲဖို႕ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပါပဲ။ Infinity War ရဲ႕ အဓိက ဗီလိန္ျဖစ္တဲ့ Mad titan ...
Ant-Man and the Wasp (2018) MCU 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ျဖင့္ Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုေပါင္းတင္ဆက္ပါသည္။MCU ဇာတ္ကားအားလံုးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မွာ Download ႏိုင္ပါသည္။++++++++++++++++++++++++++++Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ္လုပ္ေရးမွ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ နွစ္က စျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ဇာတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ Iron Man-1 နဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအပိတ္ကေတာ့ Endgame (2019) ျဖစ္ပါတယ္။Marvel Universe မွာ Infinity Stone လို႕ ေခၚတဲ့ စြမ္းအား အၾကီးဆံုး ေက်ာက္တံုး(၆) လံုးရိွပါတယ္။ အဲဒီေက်ာက္တံုးေတြဟာ စၾကဝဠာအႏွ႕ံမွာ ျပန္႕က်ဲေနတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးခ်င္းစီမွာ သီးျခားအစြမ္းေတြ ရိွျပီး သာမာန္လူေတြ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲဖို႕ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပါပဲ။ Infinity War ရဲ႕ အဓိက ဗီလိန္ျဖစ္တဲ့ Mad titan ...
Brother of the Year (2018) Brother of the year (2018)တလောလေးက ရုံတင်သွားတဲ့ ထိုင်း ဒရာမာကားလေးတစ်ကားတင်ပေးထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းဂျိန်းဆိုတဲ့ အလုပ်ကြိုးစားပြီး လှပတဲ့မိန်းမငယ်လေးမှာ ဘာမှမလုပ်တတ် မလုပ်ချင် ဖြစ်သလိုနေတတ်တဲ့ ရှက် ဆိုတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက် ရှိနေပါတယ်။ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်ကိစ္စတွေရော ညီမအတွက်ရော ဘာတာဝန်မှမယူတဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူဟာ ညီမကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေကို တွေ့လာရင်တော့ လုံးဝတာဝန်ယူပြီး ချိန်းခြောက်လွှတ်လေ့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာ ဂျိန်းနဲ့ကြိုက်မိသွားတဲ့ ထိုင်းဂျပန် ကပြားကောင်လေး မိုဂျီက လပ်ထပ်ခွင့်တောင်းလာချိန်၊ ညီမရယ် အစ်ကိုရယ် ယောက်ဖလောင်းရယ် အလုပ်တစ်ခုထဲမှာ တွေ့ရချိန်မှာ.......( မင်းသား Sunny ရဲ့ ဇာတ်ကားအားလုံးကို ဒီမှာ https://channelmyanmar.org/category/sunny/ ကြည့်လို့ရပါတယ်။) -Zawgyi-Brother of the year 2018တေလာေလးက ရံုတင္သြားတဲ့ ထိုင္း ဒရာမာကားေလးတစ္ကားတင္ေပးထားပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းဂ်ိန္းဆိုတဲ့ အလုပ္ၾကိဳးစားျပီး လွပတဲ့မိန္းမငယ္ေလးမွာ ဘာမွမလုပ္တတ္ မလုပ္ခ်င္ ျဖစ္သလိုေနတတ္တဲ့ ရွက္ ဆိုတဲ့ အစ္ကိုတစ္ေယာက္ ရိွေနပါတယ္။ငယ္ငယ္ကတည္းက အိမ္ကိစၥေတြေရာ ညီမအတြက္ေရာ ...
Papillon (2018) Papillon(2018) ဟာ ၁၉၇၃ခုနှစ်က Papillonကို အသစ်တဖန် ပြန်လည်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Henri Charrièreရဲ့ Papillon and Banco ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ဇာတ်လမ်းစာအုပ်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Papillonဟာ လူသတ်မှုတစ်ခုနဲ့အမှုဆင် အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရပါတယ်။ သူနဲ့အတူအခြားသောအကျဉ်းသားတွေဟာ တောင်အမေရိကမှာ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ Papillonဟာ ထောင်ထဲစရောက်ကတည်းက ထွက်ပြေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေသူပါ။ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါထွက်ပြေးဖို့ကြိုစားလိုက် ပြန်လည်အဖမ်းခံရပြီးအပြစ်ဒဏ်တွေတိုးလိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ပါစေ ဇွဲမလျှော့ပဲအကြိမ်ကြိမ်ခါခါထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားမှုနဲ့ လုံ့လဝီရိယတွေကြောင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ဝင်ခန်းတိုင်းက ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေရသလို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဇာတ်ကားဟောင်းPapillon(1973)ဟာလည်း လူကြိုက်များပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက် အသစ်တဖန်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ယခု Papillon(2008)ကိုတော့ အထူးတလည်ညွှန်းနေစရာတော့မလိုပါဘူး။ ပါပီ ရဲ့ ဇတ်ကြောင်းဟာ စာအုပ်တွေ ရုပ်ရှင်တွေ များစွာထွက်ပြီး ဖြစ်လို့ ဇတ်လမ်းရဲ့ စပွိုင်လာကို ဖွင့်ချထားသလို ဖြစ်ရင် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ဇတ်လမ်း ရဲ့ ရသ ကတော့ တမူထူးခြားနေမှာပါ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Hnin Amy Khine ပဲဖြစ်ပါတယ်… File Size : 1.4 GB Quality : 1080P BluRay Running Time : 2h 13min Format : Mp4 Genre : Crime , Drama , Mystery Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : Rarbg Translated by Hnin Amy Khine Encoded by ...
Detective Dee: The Four Heavenly Kings (2018) ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ၂၀၁၃ ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Young Detective Dee - Rise of The Sea Dragon ရဲ့ Sequel အနေနဲ့ထွက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ရှေ့က အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေ အကုန်နီးပါး ပြန်ပါဝင်ထားပါတယ်။၂၀၁၀ ကထွက်ရှိပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Detective Dee-Mystery of The Phantom Flame ရုပ်ရှင်ရဲ့ Prequel ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ Rise of The Sea Dragon ရုပ်ရှင် အဆုံးကနေပြန်လည်စတင်ထားပြီးရှင်ဘုရင်က စုံထောက်တီ(ဒီး)ကို နဂါးနိုင်ဓါး (ကျိုင်းတံ) အပ်နှင်းပြီး တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို စေခိုင်းနိုင်တဲ့ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းလိုက်တာကနေ စတင်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာအပ်နှင်းလိုက်တဲ့အတွက် ရှင်ဘုရင်ကို တရုတ်ပြည်သမိုင်းမှာတစ်ဦးတည်းသောဘုရင်မဖြစ်လာမယ့် မိဖုရားဝူက အမျက်ရှတော်မူပါတယ်...စုံထောက်တီ(ဒီး)လို ဦးနှောက်ပဲရှိပြီး မျိုးရိုးက မင်းမှုထမ်း သာမန်ဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးကို အာဏာအပ်နှင်းရမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့။(အဲ့ဒီခေတ်ကတည်းက အသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူတွေထက် မျိုးရိုးက ပိုစကားပြောခဲ့ကြပုံပေါ်ပါတယ်..ဤကား စကားချပ်။)ဒါနဲ့ မိဖုရားဝူက ပွဲကြမ်းတော်မူတယ်ပေါ့...ရှင်ဘုရင်ကလဲ ...
House of Hummingbird (2018) ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ တံတားပြိုကျမှု အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီးရိုက်ကူးတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်နဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် အခြေပြုရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာကတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ တက်သစ်စအမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ Kim Bora ဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်ကားနဲ့ ဘာလင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုအပါအဝင် ဆုပေါင်းများစွားကို ရရှိထားတဲ့ အလားလားရှိတဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းကလည်း ဒါရိုက်တာ Kim Bora ငယ်စဉ်က ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို အခြေပြုရိုက်ကူးထားပြီး ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မမျှော်လင့်ပဲ ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေရယ်၊ သူ့ရဲ့ အချစ်နဲ့ ဘဝအတွက် ရှာဖွေမှုတွေကို ခံစားကြည့်ရှူရမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ နိုင်ငံတကာဆုရ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်သလို အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးဖိုင် မထွက်ရှိသေးတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားဘာစကားကနေ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပြီး CM ကနေ ဦးဦးဖျားဖျား တင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသံကိုသာ အဓိကထား နားထောင်ပြန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း မမှန်ခဲ့သည် ရှိသော် သည်းခံကြည်ံရှုပေးကြပါရန်... ဒီရုပ်ရှင်ကားကို Phu Nge Nge Thein မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပြီး အညွှန်းကို ကိုဇင်ကိုကို မှ ရေးပေးထားပါတယ် Thit San Khant မှ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။zawgyi ဒီ႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ တံတားၿပိဳက်မႈ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး႐ိုက္ကူးတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္နဲ႔ ျဖစ္ရပ္မွန္ အေျချပဳ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာကေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ...
IMDB: 8.1/10 181,528 votes